Ngaba Ndimele Ndicinge Ngokuyeka Isikolo? | Abafikisayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ngaba Ndimele Ndisiyeke Isikolo?
Kufuneka ucinge ngoku
Kwindawo okuyo umthetho uthi ngokomlinganiselo umntwana ufanele afunde iminyaka emingaphi? Ngaba sele uyigqibile loo minyaka? Ukuba akusikhathaleli isiluleko seBhayibhile esithi ‘ wathobele amagunya alawulayo ’ uze uyeke esikolweni ngaphambi kokuba ufikelele loo minyaka, usishiyile isikolo.—Roma 13:1.
Ngaba uyifikelele imfundo obuyifuna? Yiyiphi injongo onayo ofuna ukuba imfundo mayikuncede uyifikelele? Akuqinisekanga? Ufanele uyazi! Okanye ufana nomntu okhwele uloliwe ongazaziyo ukuba ufuna ukuya phi. Ngoko hlala phantsi nabazali bakho nize nincokole ngalo mbandela ungezantsi uthi “ Iinjongo Endinazo Ngemfundo.” Ukuba uyeka isikolo ngaphambi kokuba ufikelele iinjongo zakho nabazali bakho, uyanikezela.
Ukuyeka isikolo kufana nokutsiba kuloliwe ngaphambi kokuba ufike apho uya khona
Kutheni ufuna ukuyeka phakathi? Kusenokwenzeka ukuba ufuna ukunceda intsapho yakho ngemali okanye ukwenza umsebenzi ongabhatalwayo. Izizathu ezingenangqondo isenokuba kukubaleka ukubhala iimviwo okanye ukwenza umsebenzi wesikolo ekhaya. Kufuneka uyazi eyona nto ikubangela ukuba ufune ukuyeka—enoba ifanelekile okanye uyeka nje kuba uthanda. Ukuba uyeka phakathi nje kuba ubaleka ubunzima, usengxakini.
Ukuyeka isikolo kufana nokutsiba kuloliwe ehamba, ungekafiki apho uya khona. Kusenokwenzeka ukuba lo loliwe akahambi kamnandi, nabantu okhwele nabo abanabubele, kodwa ukuba uyatsiba, ngokuqinisekileyo akuzi kufika apho uya khona yaye usenokwenzakala. Ngokufanayo, ukuba uyasiyeka isikolo, kusenokuba nzima ukuba ufumane umsebenzi. Ukuba uyawufumana, usenokuba akuzi kufumana mali ininzi obuza kuyifumana xa ubugqibile esikolweni.
Kunokuba uyeke, zama ukujongana neengxaki ozifumanayo esikolweni. Xa usenjenjalo, uya kukwazi ukunyamezela yaye uya kukwazi ukujamelana neengxaki ezifanayo xa sele usebenza.
Iinjongo Endinazo Ngemfundo
Eyona nto ibaluleke ngayo imfundo kukunceda ufumane umsebenzi oza kukwenza ufumane imali yokondla wena nentsapho yakho. (2 Tesalonika 3:10, 12) Ngaba sele ucingile ngomsebenzi owufunayo nendlela isikolo esiza kukunceda ngayo uwufumane? Ukuze ubone enoba imfundo yakho ikusa kwicala elifanelekileyo, khawuphendule le mibuzo:
Yintoni endikwaziyo ukuyenza? (Ngokomzekelo, ngaba uyakwazi ukuphila nabantu? Uyakuvuyela ukusebenza ngezandla zakho okanye ukwenza izinto nokuzilungisa? Ngaba uyakwazi ukusibona isizathu sokuba kubekho ingxaki uze uyicombulule?)
Yimisebenzi enjani eya kundenza ndikwazi ukusebenzisa izinto endizaziyo?
Yiyiphi imisebenzi ekhoyo apho ndihlala khona?
Ndifunda ntoni ngoku eya kundenza ndikwazi ukufumana umsebenzi?
Ngoku yiyiphi imfundo endinokuyikhetha ukuze ndikwazi ukufiyikelela kakuhle injongo endinayo?
Khumbula, ufuna ukuphumelela kwimfundo oza kuyisebenzisa. Ngoko sukufunda izinto ezingaphezu kwamandla akho uze ube ngumfundi ongahambeli ndawo—ongehliyo “kuloliwe” kuba ebaleka ukwenza izinto ekuza kufuneka azenze njengomntu omdala.